Ulo Ozo Iwu Iwu Iwu Federal Federal na Congress? onye ọka iwu cannabis
Onu ego ole iwu mmebe iwu Federal na Congress?
Ihe dị ka ụgwọ asatọ dị na Congress ugbu a iji nye marijuana iwu n'ụzọ ziri ezi, mana a na-ewebata ọtụtụ ihe kwa ụbọchị. Ego ndị dị mkpa iji lelee bụ: STkpụrụ Iwu, SAFE Banking Act, Marijuana Justice Act, REFER Act, SECA, na CAREERS Act
Ọtụtụ n'ime ụgwọ ịse wii wii ka ha na-erute site na nzuko omeiwu abuo abuo - usoro ihe omume, ma obu ndi otu ikike nke steeti.
Anyị Ndị ọka iwu nke Cannabis kwenye na ụgwọ ikike ikike nke States na Congress enweghị iwu na-akwadoghị, ma ghara ịdị irè karịa ego a na-eme na Congress na-atụ aro ka ịhapụ wii wii na Iwu A na-achịkwa kpamkpam. Anyị ga-emetụ nkenke aka na ụgwọ asatọ a tụlere na vidiyo dị n'elu, n'okpuru.
Kpọọ ndị ọka iwu azụmahịa Cannabis na Okwu Iwu Federal
Thomas Howard anọwo na-azụ ahịa kemgbe ọtụtụ afọ ma nwee ike inyere gị aka ịnyagharịa gaa na mmiri kachasị baa uru. Kpọọ ya taa gbasara azụmahịa azụmaahịa maka hemp ma ọ bụ wii wii na Illinois.
Ọnọdụ Iwu Mmebe Iwu Federal - 2019
2019 hụrụ ọgbakọ Cannabis kachasị nwee akụrụngwa na akụkọ ntanetị kemgbe ọ mepere maka nnọkọ nke 116 (oge ọ bụla nke Congress bụ afọ 2). Anyị kwenyesiri ike na iwu ịse wii wii dị nso karịa mgbe ọ bụla, mana ọ bụghị mgbe niile iwu mmebe iwu iwu gọọmentị na-achịkwa, anyị na-amalite site na ụgwọ dị mma, nke nwere ohere kachasị mma nke ịgafe ma bụrụ iwu.
Iwu SAFE SAFE - na Congress
Anyị edeela ọtụtụ akwụkwọ banyere akwụkwọ iwu marijuana kachasị ịga nke ọma mgbe ọ bụla na Congress - na SAFE Banking Act.
Yabụ, anyị nwere ike iweghachi ya ọsọsọ. SAFE Banking Act na-akọwapụta oge ọhụụ nke ọrụ iwu, "ụlọ ọrụ azụmahịa metụtara cannabis" ma mepee ya na ọrụ ego. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ mpụ gọọmentị na-egbochi ụlọ ọrụ gọọmentị na-enwekarị iwu ịnweta ịnweta akaụntụ akụ.
Ogologo akụkọ dị mkpụmkpụ, Iwu SAFE na-edozi nke ahụ niile ka ụlọ ọrụ azụmahịa nwere ike metụtara cannabis nwee ike ịkwakọ ahịa dịka azụmahịa ọ bụla ọzọ ma zere ịkwa akwa na-enwe nsogbu na-esite n'ịmere azụmahịa gị n'enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụ ego siri ike nke chọrọ nchebe, ejikere. ndị na-eche nche na nsogbu ndị ọzọ na ndekọ ego na-enyere aka izere.
Iwu --B --R - - Iwu ego Cannabis na-ekwekọghị na Congress
Streme ka nnochita nke iri site na Ntinye Obi (Steeti) na Congress na-eme ka eziokwu abụọ dị mkpa banyere Congress nke ọtụtụ mmadụ leghaara anya:
Congress na-ewebata iwu na-akwadoghị iwu oge niile, na
Congress hụrụ n'anya iji kwụọ ụgwọ acronyms okwu okwu
TheB STR Act Iwu ahụ mezigharịrị Iwu Nchịkwa Ewupụtara maka imepụta usoro dị egwu nke steeti na-anapụ ndị mmadụ nnabata ikike nhazigharị nke 14 ha na nchedo nha anya n'okpuru iwu. Ndozigharị nke iri na anọ bilitere mgbe agha obodo gasịrị iji gbochie ụfọdụ steeti ịkpa oke megide ndị ya yana site n’imeso ha ihe dị iche iche n'okpuru iwu.
Cannabis na-eto na Congress
n'okpuru Iwu Usoro, onye nọ na steeti marijuana nke iwu ga-anata marijuana nke iwu na gọọmentị etiti, mana onye nọ na steeti wii wii na-emebi iwu ga-ata ya ahụhụ na gọọmentị etiti n'okpuru otu iwu ahụ. Maka nke a, a ga-emeso ụmụ amaala iwu dị iche iche na ọkwa gọọmentị na steeti gọọmentị dabere na steeti ha bi - a / k / a Actkpụrụ Iwu bụ ihe megidere iwu maka ikike gị ị nweta nchedo nha anya n'okpuru iwu yana ọtụtụ ka ikike ikike iwu gọọmentị nke steeti ndị ọzọ na nzuko omebe iwu.
Iwu Erimeri marijuana na anakpo ịkpa agwa wii wii sitere na nchịkwa ihe ana - achịkwa (CSA), wee mepụta usoro maka ị na-enweta ego ụtụ sitere na ire nke wii wii maka gọọmentị etiti. Ọ bụ ezie na anyị na CannabisIndustryLawyer.com na-akwado akwụkwọ mbịpụta cannabis site na CSA, anyị achọghị ụtụ isi gọọmentị ọ bụla ma na-ahọrọ mkpụrụ ego ụtụ steeti ahụ n'otu n'otu. Steeti ahụ chọrọ ego ha ga enweta karịa gọọmenti etiti, ọkachasị steeti ndị dị na etiti ọdịda anyanwụ, dịka Illinois.
Nmezi ihe ndi ana - eme ka anwanu nke Marijuana
Otu ihe iwu niile gọọmentị nyere iwu bụ mgbanwe maka CSA - iwu mebiri cannabis niile kemgbe 1970, bụ nke emezigharị na mbubreyo 2018 iji wepu hemp THC-enweghị. Ruo oge ahụ, a na-emeso cannabis niile dị ka a ga-asị na ọ bụ wii wii… .nke a nwere ọtụtụ aha dị iche iche nye ndị na-egwu jazz, dị ka jive, ma ọ bụ reefer, nke na-ewetara anyị ụgwọ na-esote na Congress iji nye marijuana iwu.
Iwu nchedoro - igbochi oke iwu gọọmentị Federal
Reefer bụ okwu Cab Calloway ji eme wii wii site na abụ ya a ma ama na 1933, "Reefer Man." Mgbe ihe karịrị afọ 80 gachara, Congress na-eji nzukọ a na-akpọkarị aha ya maka imepụta okwu site na okwu maka akwụkwọ ego ya - na Iwu Iwu.
The AKFR RER. EGO dị ka Iwu Ego, ebe ọ na-enye ndị steeti ikike ịnwe iwu wii wii nke ha.
Agbanyeghị, ọ dị ka nke iwu na-akwadoghị karịa Usoro Iwu n'ihi na REFER Act na-agbachitere gọọmentị etiti ịmanye iwu cannabis megide ihe iwu steeti ndị ọzọ mere. Nke a bụ usoro iwu na-akwadoghị n'ihi na Congress nwere ikike ịhazi ego ndị dị iji tinye n'ọrụ iwu, agaghị emezigharịrị iwu gọọmentị ka ọ bụrụ ihe na-ezighi ezi dịka ha nọ n'okpuru Iwu Ọnọdụ.
TL; DR = NKỌP >R> NSAN> Mmechi Iwu, mana ọbụghị iwu zuru oke, maka ihe dị gị mkpa.
The Marijuana Justice Iwu (MJ Act) bụ ụgwọ akwụkwọ Cory Booker nke bụ akụkụ nke nnukwu usoro nzọụkwụ ọzọ, mana egosiri na ọ bụ ụgwọ nke aka ya naanị ya. Iwu Stepkwụ na-esote bụ nnukwu mmebe iwu, yana imebi iwu MJ
Iwu MJ ọ bụghị naanị igbochi iwu wii wii n'ụzọ zuru oke site na idobe ya na CSA, mana ọ na-aga n'ihu ịkọzigharị mmezi ikpe ndị omempụ dị mkpa mgbe afọ 80 nke usoro mmerụ ahụ merụrụ ndị mmadụ ahụ site na ịhapụ ịictionụ ọgwụ ọjọọ, ma ọ bụ osisi n'ihe metụtara wii wii. Iwu MJ na-akpọkwa mkpochapụ mkpesa wii wii na-akpaghị aka!
Ọ ga - enyere ọtụtụ ndị gọọmentị etiti aka ịrịọ maka mbelata ahịrịokwu ha ma na - enyere aka weghachite ndị merụrụ emerụ site na iwu wii wii ka ọha mmadụ merụrụ ahụ.
Iwu MJ bụ ụgwọ kachasị amasị anyị n'ime ha niile na Congress (anyị na-akwado Iwu Nzọụkwụ Ọzọ nke gụnyere MJ Act), nuff kwuru.
Iwu Iwu Iwu Federal na nzuko omeiwu
Nke a bụ oge kachasị arụ ọrụ na iwu marijuana na ọkwa gọọmenti etiti ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri ise mgbe CSA bilitere, mana ugbu a, iwu ndị a na-atụ aro niile na-edozi eziokwu ahụ dị anyị n'ihu. Leggba wii wii na-arụ ọrụ maka steeti ndị nwalere ya, ọ ka mma karịa ọgwụgwọ wii wii ugbu a dịka heroin n'okpuru iwu ọgwụ gọọmentị.